विस्तारै गर्मि मौसम अब सुरु हुदैछ, यसरी स्वस्थ रहनुस – Halkhabar kura
१९ फाल्गुन २०७६, सोमबार १०:३२
विस्तारै गर्मि मौसम अब सुरु हुदैछ, यसरी स्वस्थ रहनुस
काठमाडौं । अहिले फागुनको महिना छ ।जाडो मौसम लगभग बिस्तारै सकिदै गाको महसुस हामीले गर्नसक्छौ । बिहान बेलुका अलिअलि चिसो भएतापनि देउसोको समयमा हामि एकसरो कपडा मात्र लगाएर नि हिड्न सक्छौ । गर्मी बढेसँगै हाम्रो दैनिक जीवनमा अनेकन समस्या आउन थाल्छ ।
मान्छे हरेक रोगको सिकार सिकार बनिरहेको छ । उमेर अनुसार धेरै प्रकारका रोगहरुले हामीलाई ग्रसित हुन्छौ दैनिक खानामा ३०–३० प्रतिशत सलाद र उसिनेको खानेकुरा तथा ४० प्रतिशत नियमित खानाको अनुपात मिलाएर खाने हो भने थाइराइडको समस्या कम गर्न सकिन्छ । सलादमा प्याज, काक्रो, गाँजर, भिजाइएको गेडागुडी खान सकिन्छ ।
Previous कोरोना भाइरस: कुन देशमा कति जनाको निधन भयो , कति संक्रमित ?
Next के तपाईलाई थाइरडको समस्या छ ? यस्तो गर्नुस
कांग्रेस नेता रोहित प्रसाईँद्वारा प्रेस युनियन सुनसरीलाई लाखौ मुल्यको जग्गा दान ! (भिडियोसहित)
२१ चैत्र २०७८, सोमबार १२:४२
हे भगवान कसैलाई नपरोस यस्तो दु:ख – एकै मानिसका दुईटा लास जले, तर मरेको प्रमाण फेला परेन
२० चैत्र २०७८, आईतवार १५:१४
यस्तो बेला योनीबाट आएको डिस्चार्जको आधारमा उपचार गर्नुपर्छ, योनीबाट आएको डिस्चार्ज भनेको के हो ? (भिडियो)
१८ चैत्र २०७८, शुक्रबार १३:३७